Xukuumadda Ahmed Siilaanyo iyo marxaladda dawladnimo ee ay dalkii marinayaan | Awdalpress.com
Xukuumadda Ahmed Siilaanyo iyo marxaladda dawladnimo ee ay dalkii marinayaan
Waxa Daabacay staff-reporter on Apr 7th, 2017 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Hantidii dawaladda sida xafiisyadii, garoommadii, seerayaashii iyo guryihii dawladda ee ka dhisnaa magaala madaxyada gobollada ayaa dhammaanba la iibiyey, oo laga xaraashay dad ganacsata ah. Waxa kale oo dhammaanba is taagay hawlihii horumarineed iyo hawl maalmeedkii dawladnimo, magaalada Borama ayaana ugu sii daran.
Ilihii dhaqaalaha waxa lagu soo daayey dad boobaya, oo aan ku socon hab dawladeed. Meelaha ugu sii daranina waa Lawya Caddo, Berbera, Kala Baydh iyo guud ahaanba gobollada Somaliland. Macdantii iyo ciiddii dalka ayaa si aan qiyaas lahayn looga gurtaa Buurta Siimoodi iyo dooxa Bariisle. Macluumaadkii shidaal amma xogaha la midka ah ayaa wasaaradda Macdantu si aan qarsoodi lahayn ay uga iibisaa shirkado caalami ah. Dadka gobollada galbeedka iyo Oodweyne ama Burco ku noolina waxa ay taagan yihiin xilli kala guur oo ay kala dooranayaan in ay rajo sugaan oo ay samraan iyo colaad u diyaar garoobaan. Mana jiro xal kale.
Xisbiga Waddani oo ah ka keliya ee ay u arkaan in uu dalka badbaadin karo ayaa isna u eg mid ka gaabinaya hawshii kaga beegnayd marxaladda uu dalku galay, inkasta oo guddoomiyaha gobolka Awdal Mr. Maal dhawaan uu si ballaadhan u iftiimiyey mashaqada dalkii majara habaabisay. Laakiin sida hoggaanka Waddani ballan qaaday ama u qorshaysan, waxa ay dhawaan war cad ka soo saari doonaan dhammaanba dibin daabyada dalka ka dhacaya. Xoolaha ummadda ee sida waalan loo kala iibsanayana waxa ay xisaabteeda u dhigi doonaan si cad oo aan mugdi ku jirin.
Laakiin xisbiga Kulmiye ee uu hoggaaminayo Muse Bixi ayaan isagu arrimaha dalka ka dhacaya ka hadli karin, oo aan kalmad ka odhan karin. Una habranaya xukuumaddaasi aan arkayno. Waxase xisbiga Kulmiye moog yahay in ay waxa dalka ka dhacayaa ay jallaafooyin ku yihiin, dadkuna kula xisaabtamayo. Haddiise uu Muuse Biixi doonayo in uu maanta indhaha iska qabto, barrina haddiiba uu guulaysto uu seef aan waxba hanbaynayn la soo baxo, waa mid aanay dadku sugi karin.
Qabyaaladda iyo kala qoqobka uu wado xisbiga Kulmiye iyo oday dhaqameedka gobollada ee cayda iyo aflagaadada isku marinaya mareegaha, ee ay marayso in xisbigii Kulmiye ugu abtiriyaan reero, ayaa iyana ah mid nasiib darro iyo cawaaqib xumo ku keenaysa shacabka gudo iyo dibadba la kala qoqobay. Mooshinka ay dhawaan Beesha Subeer Awal la timid Borama ayaana ka markhaati ah. Haddii ay sidaasi ku sii socotana waxa ay dimuqraadiyaddii Somaliland ku danbayn doontaa reer ba’aw yaa ku leh.
Wasiirrada waraabo u taagga ah iyo kuwo hantida malafsadaana waa bar ceebeedka calaamadda u ah xukuumadda Siilaanyo, shakhsiyaadka aan shacabka sharafta ku lahayn ee uu Ahmed Siilaanyo golahiisa wasiirrada ku soo urursadayna waa kuwo aan ka tarjumayn golaha dawladnimo ee ay shacabku u baahan yihiin. Sharaftiisii iyo taariikhdii uu dalka uga tagi lahaana ku riday god madaw.
Isku soo wada duuboo, waxa aan shaki ku jirin in ay Somaliland galbatay, oo ay gebi ka sii laad laaddo, qorshaha dawladnimo ee lagu hoggaaminayaana uu yahay mid cawaaqib xun reebi doona.